Izibalo: Ukukhula KweSocial Media Customer Service | Martech Zone
Izibalo: Ukukhula Kwezinsizakalo Zamakhasimende Ezomphakathi
NgoLwesihlanu, Okthoba 27, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Kungenzeka ukuthi usanda kufunda i- isipiliyoni samakhasimende nge-Waze ku-Twitter lapho ngibika isiphazamisi. Angizange ngijabule ngempendulo. Hhayi, angingedwa njengoba abathengi abaningi ngokwengeziwe bephendukela ezinkundleni zokuxhumana futhi balindele ukuxazululwa kwezinkinga zabo zokunakekelwa kwamakhasimende. Amanye amakhasimende ami awazange ajabule kakhulu lapho ngibatshela ukuthi ukuphendula kwamakhasimende kubaluleke kangakanani ezinkundleni zokuxhumana, kepha kuyisithangami somphakathi kanye nethuba elingavamile lokuthi inkampani yakho ikhanye.
Ukwesekwa kwamakhasimende okuseqophelweni kanye necebo elifanele lezokuxhumana kuyisidingo samabhizinisi. Le infographic iveza ukubaluleka nokwazisa izinkundla zokuxhumana ezingangeza kunoma yiliphi ibhizinisi.
Eqinisweni, umuntu oyedwa kwabane abasebenzisa imithombo yezokuxhumana bakhononda ngezinkundla zokuxhumana, kanti abangama-1% balindele usizo. Abantu bathanda imithombo yezokuxhumana ngokunakekelwa kwamakhasimende kunokuxoxa, i-imeyili, noma ifoni! Lokhu infographic, Ukukhuphuka Kokunakekelwa Kwamakhasimende Kwemidiya Yezenhlalo, imininingwane yalokhu okulindelwe, izitayela, nokuthi imikhiqizo idinga ukuphendula kanjani.
Ngincoma ukulalela yethu i-podcast ngemithombo yezokuxhumana kaDell Ithimba ukuze ufunde ukuthi ungakwenza kanjani kahle. UDell uneqembu elitholakala kubo bonke abasebenzi babo ukuze banikeze ukusekelwa okuqondile ngezokuxhumana. Lokho kusho ukuthi ungakhalaza kunoma yisiphi isisebenzi, futhi bazohambisa ithimba lezinsizakalo zamakhasimende. Akugcini lapho, iqembu eliqokiwe linawo wonke amazinga okusekela nokuzimela ukuxazulula izimo ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende agcinwa ejabule.
Yini Ingozi Yenkinga Yesipiliyoni Samakhasimende Embi Kuma-Social Media?
Isikhathi sokuphendula esingesihle singaholela ekukhuleni okufika ku-15% kumkhankaso wamakhasimende
U-30% wabantu uzoya koqhudelana naye uma ungaphenduli ngezinkundla zokuxhumana
Ukungaphenduli isikhalazo kunciphisa ukumelwa kwamakhasimende ngama-50%
Abantu abangama-31% bathumela ku-inthanethi ngemuva kokuba benolwazi olubi lokunakekelwa kwamakhasimende
Ukunakekelwa kwamakhasimende osezingeni eliphakeme kubangela ukwanda okukhulu konyaka okungu-81% kwemali engenayo evela ekudlulisweni kwamakhasimende kanti i-Return on Investment ingama-30.7%!
Yini i-ROI Yezinsizakalo Zamakhasimende Ezomphakathi?
Izinkampani ezinolwazi olungcono kakhulu lokunakekelwa kwamakhasimende kwezenhlalo ezingama-92% ukugcinwa kwamakhasimende
Inkampani yezindiza ephendula i-Tweet ibiza u- $ 8.98 (noma u-3%) ukwenyuka kwemali engenayo ngokuthengiselana ngakunye
I-telco ephendula ku-Tweet ibiza u- $ 8.35 (noma u-10%) ukwenyuka kwemali engenayo ngokuthengiselana ngakunye
Uchungechunge lwe-pizza oluphendula ku-Tweet lufanele ukukhuphuka kwe- $ 2.84 (noma ama-20%) emalini etholakalayo nge-trnsaction ngayinye
Nayi i-infographic ephelele kusuka ku- I-WebsiteBuilders:
Tags: Insizakalo yekhasimendebuyela kutshalomaliimali nge-tweet ngayinyeRIOsocial mediaezokuxhumana namakhasimendeTwitter
Douglas Karr Friday, October 27, 2017 Saturday, February 13, 2021
Ngabe amaSoftware aku-Intanethi akhomba Umngani WePulatifomu noma Umncintiswano?
Izibalo Ezinkulu Zezemidlalo Kuma-Social Media
Shiya impendulo →
Okthoba 30, 2017 ngo-9: 13 AM
Ukusetshenziswa ngempumelelo kwezokuxhumana kwezinsizakalo zamakhasimende nakho kungasiza ekuvikeleni inhlangano kwezinye izehlakalo eziphazamisayo. Thatha udaba lweNdlu Ekhanyayo nge-Spectrum. Bakwazile ukugcina ukuphendula okuphezulu ngesikhathi soguquko, okungangabazeki ukuthi lwaziswa amakhasimende abo.